Iikholeji ezili-10 eziphambili eCalifornia kwisayikholoji 2022
Iikholeji ezili-10 ezilungileyo eCalifornia kwisayikholoji
I-Psychology yenye yezona zonyango zihlawulwa kakhulu, sixoxe ngeekholeji ezilungileyo eCarlifonia kule post yebhlogi kwabo bafuna ukukhaba ukuqala umsebenzi ebaleni. Ukufumana imfundo kwesinye sezona zikolo zibalaseleyo kuya kuwukhulisa umsebenzi wakho.
Ngokwe-American Psychological Association, iPsychology, iPsychology ijongana nophando lwengqondo nokuziphatha, kukho iindawo ezahlukeneyo zePsychology ezibandakanya nangona zingaphelelanga kwezi zilandelayo:
Ukukhubazeka kwengqondo kunye noPhuhliso
Kukho iikholeji ezithile kwiCalifornia eyaziwa ngokuba yiPsychology kwaye siyayiqonda ingxaki eza nokukhetha phakathi kwezinto ezininzi onokukhetha kuzo, yiyo loo nto eli nqaku lilapha ukukukhokela ngombono ongcono wezikolo ezahlukeneyo ezikhoyo kwaye yeyiphi kufuneka ukhethe.
Inani leekholeji ezilungileyo eCalifornia zePsychology zingezantsi. Unokwenza ukhetho lwakho lokuqalisa uhambo lwakho lokufezekisa injongo yakho yemfundo kunye nekhondo lomsebenzi kuyo nayiphi na iyunivesithi oyibona ilungile.
1 Zenza ntoni iikholeji eCalifornia zePsychology?
2 Izidingo zokufaka isicelo kwiikholeji eCalifornia kwiPsychology
3 I-10 yeeKholeji eziGqwesileyo eCarlifonia kwiPsychology
3.2 2. IYunivesithi yaseCalifornia, uDavis
3.3 3. IYunivesithi yaseCalifornia, eSanta-Barbara
3.4 4. IYunivesithi yaseSouthern California
3.5 5. IYunivesithi yaseChapman
3.6 6. IYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles
3.7 7. IYunivesithi yasePepperdine
3.8 8 IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego
3.9 9 IYunivesithi yaseCalifornia, iSanta Cruz
3.10 10 IYunivesithi yaseCalifornia, Irvine
Zenza ntoni iikholeji eCalifornia zePsychology?
Ewe, njengoko kuchaziwe ngaphambili, i-Psychology ijongana nokufundwa kwengqondo yomntu kunye nokuziphatha. Kwimeko apho uyazibuza ukuba zeziphi iikholeji eCalifornia zePsychology ezenzayo. Nantsi ingxoxo:
Bafunda indlela yokuziphatha kwabantu njengokuba befunda iinkqubo zengqondo ezibandakanya ubuchopho, ingqondo, kunye nokunxibelelana kwabantu ekuhlaleni. Ukufundela Psychology kwikholeji yaseCalifornia kukulungiselela umsebenzi kwiPsychology ukwakha amaphupha ngokwenyani. Iikholeji zaseCalifornia zePsychology zifundisa izakhono ezixabisekileyo eziya kwenza ukuba umfundi aqeshwe kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi.
Izidingo zokufaka isicelo kwiikholeji eCalifornia kwiPsychology
Kukho iimfuno ezahlukeneyo zokungena kwikholeji yaseCalifornia yePsychology yezikolo ezahlukeneyo. Kwidanga lokuthweswa isidanga, yahluke kakhulu, ngendlela efanayo yahlukile kwisidanga sokuqala.
Ukulandela isidanga sokuqala kwiPsychology, akunakubakho zifundo zichaziweyo kodwa iBiology okanye iNzululwazi ngezoBomi iya kunika ithuba kumfundi ngenxa yendlela Psychology egxile ngayo kwingqondo yomntu nakwizitho zemizwa. Kubalulekile ukuba uyazi ukuba ukufumana amanqaku aphezulu okwamkelwa (APS) kukunika ithuba elongeziweyo ngaphezulu kwabanye abafaki zicelo abanamanqaku angaphantsi kwakho.
Izinto ezifunekayo kwiPsychology yezikolo ezahlukeneyo zezi zilandelayo:
Ukukhetha i-GPA ye-3.0 ekhethiweyo. Umgangatho ophantsi unikwa abafaki zicelo abanee-GPA ezingaphantsi kwe-3.0.
Isidanga sokuqala kwiPsychology
Ubalo lweengqondo kunye neendlela zekhosi ziyafuneka.
Ngamanye amaxesha, amanqaku ngokubanzi kunye nokubhalwa kwamanqaku e-GRE ayadingeka.
I-10 yeeKholeji eziGqwesileyo eCarlifonia kwiPsychology
IYunivesithi yaseCalifornia, uDavis
IYunivesithi yaseCalifornia, eSanta-Barbara
IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego
IYunivesithi yaseCalifornia Santa Cruz
1. University of Stanford
Enye yeekholeji ezilungileyo eCalifornia zePsychology. Isikolo sibonelela nge-3, iinkqubo zesayikholoji yesiDanga ngokubanzi.
IYunivesithi yaseStanford yasekwa ngonyaka we-1885. Yiyunivesithi yophando yabucala kwindawo yedolophu yaseSan Francisco, enezikolo ezintathu ezithatha ngaphezulu kweeprogram ze-40 zesidanga sokuqala kunye neenkqubo ezithandwayo zesidanga sokubandakanya amayeza, umthetho kunye neshishini.
Yayisaziwa okokuqala ngohlobo lwesakhiwo sayo sokwenza umsebenzi, kodwa saphinda sakhiwa emva kwenyikima yomhlaba ka-1906 eSan Francisco. Ikwabizwa ngokuba kukhuphiswano kunye no-UC Berkeley ukongeza kwizithethe zayo ezomeleleyo zokufunda.
Elinye lamaziko ophando athathelwa ingqalelo kwaye ivelise uninzi lweFulbright kunye neRhode Scholars. Ikwikhalenda yokufunda esekwe kwikota.
Isifundo eStanford sidlula i $ 50,000 ngonyaka. IYunivesithi yaseStanford inomlinganiso katitshala-katitshala we-11: 1 kunye nomzimba wabafundi ngokubanzi we-17,249 okanye nangaphezulu.
2. IYunivesithi yaseCalifornia, uDavis
IYunivesithi yaseCalifornia yasekwa ngonyaka we-1950, ibisebenza kuphela njengesona sikolo siphambili sezolimo kwinkqubo ye-UC, kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo.
Isikolo singaphezulu kwama-35,000 abafundi ababhalise kwizidanga zokuqala ngowama-2021. Sibonelela ngeenkqubo ezi-3 zesidanga ngokusebenza kwengqondo.
Iyunivesithi inkulu kakhulu, iyunivesithi kawonkewonke yeminyaka emine eNtshona yeSacramento, idolophu esemaphandleni eDavis.
IYunivesithi yaseCalifornia, eDavis ibonelela ngaphezulu kweenkqubo zokuthweswa izidanga ezingama-80 ngokusebenzisa amasebe amkelwe kwilizwe liphela afana neBetty Irene Moore School of Nursing kunye ne-UC Davis School of Medicine.
Imbali ye-Psychology kwikholeji inesidima. Abafundi abangama-32 baphumelela i-2019, i-19 yafumana izidanga zeMasters, kwaye i-13 yafumana isidanga sobugqirha
I-UC Davis yaziwa ngokubanzi njenge-Ivy yoluntu, mhlawumbi njengesiphumo sophando olubanzi olwenzeka kwikhampasi nakwizibonelelo zengingqi ezinje ngeCalifornia Raptor Centre, iCrocker Nuclear Laboratory, iBodega Marine Reserve.
IYunivesithi yaseCalifornia, eDavis inomlinganiso wabafundi notitshala we22: 1 kunye neqela labafundi ngokubanzi lama-36,634 okanye elingaphaya. Ilula ngokulula enye yeekholeji zaseCalifornia zePsychology.
3. IYunivesithi yaseCalifornia, eSanta-Barbara
IYunivesithi yaseCalifornia ibonelela ngeenkqubo ezi-3 zaseCalifornia ngokubanzi. Yiminyaka emine eyunivesithi kawonkewonke kwidolophana ephakathi.
Ubudlelwane babafundi kunye notitshala kwiYunivesithi ngama-24: 1 kwaye bunomzimba oqikelelweyo womzimba wabafundi abangama-26,314.
Iyunivesithi ibambe ukuvunywa kwi-Clinical Psychology, Counselling Psychology, Professional Psychology, Professional / Scientific Psychology, School Psychology, kunye nezinye iikhosi ezininzi ezivela kumaqumrhu ahlukeneyo eMelika nakwilizwe liphela.
Ukwamkelwa kwiYunivesithi yaseCalifornia, iSanta- Barbara kuyinto eqhelekileyo. Isikolo sibonelela ngeenkqubo zemfundo ezamkelwa kwilizwe liphela kwimeko yokusebenzisana kunye namandla.
Ukufunda kwiYunivesithi yaseCalifornia, eSanta Barbara kunomdla kuba kuya kuthetha ukuba ufumana imfundo esemgangathweni kwenye yezona ndawo zintle emhlabeni.
Sisiqalo esihle sokwenza iphupha lobomi bakho lizaliseke kwaye libonakalise indlela yokuqhubela phambili kwikhondo lomsebenzi olikhethileyo. Yenye yeekholeji ezilungileyo eCalifornia zePsychology.
4. IYunivesithi yaseSouthern California
Iyunivesithi liziko labucala lophando elasekwa ngo-1880 nguRobert Widney.
IYunivesithi ngokulula yenye yezona kholeji zibalaseleyo eCalifornia kwiPsychology. Inenkqubo yokwamkelwa ekhethiweyo. Inika iinkqubo ezimbini zesayikholoji zesidanga ngokubanzi. Inezikolo ezingaphezulu kwamashumi amabini kwizikolo zesidanga sokuqala njengeKholeji yaseDornsife yeeNcwadi, ubuGcisa, kunye neSayensi.
IYunivesithi yaseSouth California ikummandla wedolophu kwintshona yeDowntown Los, Angeles. Iphumelele abafundi abaninzi kwisayikholoji kule minyaka idlulileyo.
Kwi-2019, iphumelele abafundi be-psychology abali-170 abafundi, i-157 kwi-Bachelor's degree kunye ne-13 kwisidanga se-Masters, kwaye ukusukela ngoko bekhokela umzila kwi-Psychology eCalifornia nakwindawo engaphaya.
Iyunivesithi inomlinganiso katitshala-katitshala we-22: 1 kunye nomzimba wabafundi ngokubanzi wama-48,321 okanye nangaphezulu. Yaziwa kwilizwe liphela ngokufunda kunye nophando. Lukhetho olufanelekileyo kuye nabani na ojonge ukufunda Psychology eCarlifonia kuba yenye yeekholeji ezilungileyo eCalifornia zePsychology.
IYunivesithi yaseSouth California inenethiwekhi enkulu yeAlumni kumzi mveliso wefilim kwaye uninzi lwamashishini aphambili eMelika.
5. IYunivesithi yaseChapman
IYunivesithi yaseChapman yenza isayikholoji kakuhle kwaye kule minyaka idlulileyo ibingaguquguquki ekuthweseni abafundi abafanelekileyo kwizifundo zengqondo minyaka le.
Enye yezona kholeji zibalaseleyo eCarlifonia kwiPsychology kwaye inikezela ngenkqubo yenkqubo yesayikholoji ngokubanzi. Yiyunivesithi yabucala engenzi nzuzo kwisixeko esiphakathi kunye nesikolo ngokwaso ukuba siphakathi ngokomlinganiso ngokunjalo.
IYunivesithi yaseChapman iphumelele abafundi kwizifundo zengqondo ngokuqhubekayo ukusuka kwimbali ukusungulwa kwePsychology njengekhosi eyunivesithi.
Kwi-2019, i-99 yabafundi ngokubanzi abaphumelele kwisidanga sokuqala.
Umyinge wabafundi notitshala yi-18: 1 kwaye iyunivesithi inomzimba wabafundi ngokubanzi malunga ne-9,850. Iyunivesiti ineziqinisekiso ezizodwa ezivela kumaziko ahlukeneyo okuqinisekiswa.
Uncedo lwezezimali kwiindidi ezahlukeneyo zabafundi luyafumaneka. IYunivesithi yaseChapman yenze into eqhelekileyo ukwenza ukuba abafundi abavela kuzo zonke iinkalo zobomi banandiphe izibonelelo zemfundo yaseyunivesithi eChapman ukusukela nge1861 ngokweenkqubo zabo zoncedo lwezezimali.
UChapman ubonelela ngaphezulu kweendawo ezili-110 zokufunda, ukhetho olufumanekayo kwimidla eyahlukeneyo kunye neenkanuko kodwa oku kwamkelwa kuyafumaneka kubafundi abafanelekileyo. Yenye yeekholeji ezilungileyo zePsychology eCarlifonia, yiyo loo nto kufanelekile kuye nabani na ofuna ukufundisisa Psychology eCarlifonia.
6. IYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles
Le ngokulula yenye yezona yunivesithi zinkulu eCalifornia naseMelika iphela. Eyaziwa ngokuba yi-UCLA, iyunivesithi enkulu, yoluntu, eyiminyaka emine eyasungulwa kwi-1919 kwisixeko esikhulu.
IYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles ibonelela ngeenkqubo ze-4 zesidanga ngokubanzi. IYunivesithi yaseCalifornia Los Angeles inequmrhu elikhulu labafundi malunga ne-44,371 ngokubanzi nakwi-Psychology, isikolo esiphumelele abafundi be-697 Psychology kwi-2019, i-635 ifumana isidanga sabo se-Bachelors kwi-Psychology, kunye ne-19 bagging iiDigri zabo zobugqirha kwiPsychology. Ime eLos Angeles, eCalifornia.
Umlinganiso wabafundi ukuya kutitshala umalunga ne-21: 1. Inezikolo ezintandathu zesidanga sokuqala, izikolo ezisixhenxe zobungcali, kunye neenkqubo ezine zesayensi yezempilo ngokubandakanya isebe lezobuGcisa kunye neZakhiwo elikwindawo yesizwe, isikolo samayeza, kunye nesikolo sempilo yoluntu.
Ukwamkelwa kwiYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles kukhuphiswano olukhulu kuba iyunivesithi ifumana phantse ezona zicelo ziphezulu zeekholeji ngaphezulu kwayo nayiphi na eyunivesithi ehlabathini.
Ikwanedumela leziko eliphambili lophando elasekwa kwinkulungwane ye-20. Itholakala entliziyweni yaseLos Angeles apho kwenzeka khona ukuhamba.
7. IYunivesithi yasePepperdine
Ime kwindawo enkulu yedolophu yaseMalibu, eCalifornia. IYunivesithi yasePepperdine yenye yeekholeji eziphambili eCarlifonia kwiPsychology.
Isikolo sibonelela nge-3 Psychology, iinkqubo zesidanga ngokubanzi. Nangona isikolo esilinganiselweyo sangasese esingenzi nzuzo, siqhuba kwikhalenda yemfundo yeminyaka emine.
UPepperdine unerekhodi lokuthweswa izidanga abafundi abali-115 be-Psychology General ngo-2019, abafundi abangama-65 abafumana isidanga sabo se-Bachelors kunye nama-50 abafumana isidanga seMasters. Ubungakanani beklasi kwiYunivesithi yasePepperdine I i-22 iyonke: kwi-ratio yomfundi-notitshala, umzimba womfundi ngokubanzi uqikelelwa kubungakanani be-1.
IYunivesithi yasePepperdine inembali erekhodiweyo yamalungiselelo aphezulu abafundi kumakhondo abo emisebenzi. Babambe ukuqinisekiswa okuvela kwimizimba eyahlukeneyo yokugunyazisa iYunivesithi kunye nokwamkelwa kwiPepperdine kukhuphiswano oluninzi, izifundo ziyafikeleleka nakubo.
Nge-2019, i-in-state yokufundela eyunivesithi yayiyi- $ 55,640, ukufundwa ngaphandle kukarhulumente kwaba yi- $ 55,640, ngokufanayo nakwisimo sokufunda, iincwadi zibiza ixabiso eliqikelelweyo le- $ 1250 nakwigumbi lekhampasi kunye neendleko zebhodi malunga ne- $ 15,670.
8 IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego
IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego yiyunivesithi yoluntu enkulu kakhulu ebekwe kwindawo yaseLa Jolla eSan Diego, California.
Yayisungulwa kwi-1960, ngokulula iyona khampasi e-United States ebekwe elunxwemeni inika okusingqongileyo ukubukeka okwahlukileyo macala onke.
Yiminyaka emine iYunivesithi ebisoloko igqibe ukufumana uninzi lweePsychologists ezaziwayo namhlanje.
Kwi-2019, iYunivesithi iphumelele inani elipheleleyo labafundi abangama-243 kwiPsychology, abafundi abangama-242 bafumana iSidanga sokuqala kunye nomfundi omnye ofumana isidanga sobugqirha.
Ubungakanani beklasi kwiYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego ngama-28: 1 kubudlelwane babafundi kunye notitshala kunye nomzimba wabafundi ngokubanzi linani eliqikelelweyo lobungakanani besidanga sokuqala ngo-2021 kuma-35,000.
Iyunivesithi yahlulwe yaziikholeji ezisixhenxe ezahlukeneyo zesidanga sokuqala kwaye amasebe ahlelwe ngokwamacandelo amane ahlukeneyo emfundo.
Izifundo zaseyunivesithi zilungile, abafundi bakurhulumente bahlawula malunga nekota yoko kuhlawulwa ngabafundi abangaphandle kurhulumente. Kukho imisebenzi enomdla kubafundi njengoko bekhululekile ukujoyina nayiphi na imibutho eyahlukeneyo yabafundi ebafaneleyo. IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego yenye yeekholeji eziphambili eCalifornia zePsychology.
9 IYunivesithi yaseCalifornia, iSanta Cruz
Ukufundisa okufanelekileyo nangokusebenzayo kunye nokusebenza kwengqondo kwiYunivesithi yaseCalifornia, eSanta Cruz kwaziwa kakuhle eCarlifonia nangaphaya kwayo kwaye kuyinika ukubonwa njengenye yeekholeji eziGqwesileyo eCalifornia zePsychology.
Isikolo sibonelela ngeenkqubo ezintathu zedigital Psychology. Yiyunivesithi enkulu, esidlangalaleni, yeminyaka emine eyunivesithi kwisixeko esincinci esiphumelele abafundi abaliqela besayensi yezengqondo ngokuqhubekayo kule minyaka idlulileyo.
Ingxelo ibonisa ukuba isikolo sathweswa izidanga kwizifundo zengqondo zabafundi abangama-464 ngo-2019, ngelixa abangama-443 bebonke bathweswe izidanga kwizifundo zengqondo kwisidanga sokuqala, abafundi abasibhozo baphumelela kwizifundo zengqondo zabafundi babo, abali-13 baphumelela kwisayikholoji ngesidanga sobugqirha.
Ibambe ukuvunywa kuMbutho wezengqondo zaseMelika, iKhomishini yokuVunywa.
Kukho amathuba amaninzi okufundela abafundi abavulekileyo kwiYunivesithi yaseCalifornia, eSanta Cruz. Oonjingalwazi banika ingqwalaselo enkulu kwizidanga zokuqala nakwimeko zokugqwesa okugqithileyo banxibelelane nabo abanxibelelana-lokwenyani abaya kuthi bakhulise imisebenzi yabo.
Umyinge wabafundi notitshala kwiYunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego ngama-28: 1 kwaye isikolo sinomzimba womfundi oqikelelweyo we-19,494.
10 IYunivesithi yaseCalifornia, Irvine
IYunivesithi yaseCalifornia, iIrvine yenye yeekholeji ezilungileyo eCalifornia zePsychology.
Yayisungulwa kwi-1964 kwangoko emva kokuba iLos Angeles ibonelela nge-3 Psychology, iinkqubo zesidanga ngokubanzi.
Yiyunivesithi enkulu kakhulu, yoluntu, eyiminyaka emine ekumazantsi edolophu iIrvine, eCarlifonia eqhubeke kakuhle kwiPsychology nakwezinye iikhosi ezinikezelwa kwiyunivesithi eyaziwayo.
Kwi-2019, iyunivesithi iphumelele abafundi be-273 Psychology benesidanga sokufumana isidanga seBachelor, abafundi be2 abafumana isidanga seMasters, emva koko 1 bafumana isidanga sobugqirha. Ubungakanani beklasi kwiYunivesithi yaseCalifornia, i-Irvine ineklasi enobukhulu obuphakathi be-26: Umlinganiso womfundi-katitshala o-1, iqumrhu labafundi ngokubanzi liqikelelwa kubungakanani be-33,000 yabafundi abaphantsi kwabafundi okwangoku.
IYunivesithi yaseIrvine ineekholeji ezili-13 kubandakanya nesikolo esithandwayo kukhuphiswano lweClaire Trevor School of Arts kunye nesikolo sikaDonald Bren solwazi kunye nesayensi yeekhompyuter.
Mininzi imibutho yophando ekhoyo, ebandakanya ilebhu yeFleishman, iziko le-Beckham Laser, kunye neZiko leCognitive Neuroscience apho abafundi kunye necandelo basebenza kunye ukukhuthaza uphando kunye nophuhliso eyunivesithi. Iyunivesithi ibambe ukuvunywa kwimibutho eyahlukeneyo yoqinisekiso.
Yintoni oya kuyidinga ukuze ube yiPsychologist eCalifornia?
Ewe, ukufezekisa oku, kuya kufuneka udlule kuthotho lweemviwo kunye neemvavanyo zebhodi yolawulo lwePsychology eCalifornia okanye eMelika iphela.
Kuya kufuneka ukuba ube unesidanga sobugqirha kwiPsychology kunye nokufikelela kwiiyure ezingama-3,000 zamava agadisiweyo apho i-1,500 inokuba iphambi kobugqirha.
Unokuthanda nezi zihloko zilandelayo
Uhlalutyo lokuSebenza ngokuSebenza Vs. I-Clinical Psychology: Isikhokelo esichazayo
Inzululwazi yeKhompyuter, iMathematika, ubuNjineli kunye nePsychology i-undergraduate Scholarship eCanada 2019
Okulandelayo Post:Iinkqubo ezili-10 eziPhambili zeAutism kwiZikolo zikaRhulumente